शंकर ग्रुपको ठगी धन्दा छताछुल्ल भएपछि पत्रकारलाई चुनौती दिँदै आयो खण्डन, थर्मल गनमा कालाबजारी देखि जगदम्बाको डण्डीमै ठगीः सरकार बेखबर ? - Aathikbazarnews.com शंकर ग्रुपको ठगी धन्दा छताछुल्ल भएपछि पत्रकारलाई चुनौती दिँदै आयो खण्डन, थर्मल गनमा कालाबजारी देखि जगदम्बाको डण्डीमै ठगीः सरकार बेखबर ? -
शंकर ग्रुपको ठगी धन्दा छताछुल्ल भएपछि पत्रकारलाई चुनौती दिँदै आयो खण्डन, थर्मल गनमा कालाबजारी देखि जगदम्बाको डण्डीमै ठगीः सरकार बेखबर ?
विश्वव्यापीरुपमा अदृश्य शक्तिबाट आएको अदृश्य रोग कोरोना भाइरसले नेपाल आक्रान्त भएको मौका छोपी कहिले कोरोना भाइरसको ज्वरो नाप गर्ने थर्मल गन कालाबजारी गर्ने त कहिले गुणस्तरहिन जगदम्बा डण्डी बजारमा पठाएर जनता ठगी गर्ने शंकर ग्रुपको दादागिरीले हद नाघेको फेला परेको छ ।
केही ठूला भनौदा मिडियाहरुलाई चर्को रकम खर्च गरि विज्ञापन गराएर जनतालाई गुणस्तरहिन सामान विक्री गर्दै आएको शंखर ग्रुपले मिडियामा आएका समाचार गलत भएको भन्दै पत्रकारलाई नै चुनौती दिँदै खण्डनको सूचना विभिन्न दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्दै आएको फेला परेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीमा राज्यलाई सहयोग गरि जनतालाई बचाउनुको साटो यहि मौका छोपी रातारात कमाउ धन्दामा लागेको शंकर ग्रुपका अनैतिक र घिन लाग्दा कामलाई राज्यले संरक्षण गर्नुले के सन्देश जान्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
कोरोना महामारीबीच शंकर गु्रपको ठगीधन्दाको शुरु ?
शंकर ग्रुपका मालिक शंकर अग्रवालका जेठा छोरा सुलभ अग्रवाल कोरोना भाइरसको महामारीबीच भएको लकडाउनका समयमा थर्मल गनमा कालोबजारी गर्दैगर्दा रंगेहात समातिए ।
जगदम्बा स्टिल्स प्रा.ली. का सञ्चालकसमेत रहेका सुलभ अग्रवाल ६७ थान थर्मल गनसहित समातिएका थिए । प्रतिगोटा ३ हजार पर्नेे थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा बेच्दै गर्दा पक्राउ परेका अग्रवालमाथि अहिले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा विचाराधीन भेटिएको छ । यही प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि चासो दिएर शंकर ग्रुपका सबै कम्पनी तथा उसको सबै लगानीमाथि नै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
२०६८ सालमा पनि भ्याट छलीको मुद्दा लागेको शंकर ग्रुपले त्यतिबेला मोटो रकम घुस खुवाएर सफाई पाएको आरोप अहिले पनि लाग्दै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फेडरमा सबैभन्दा बढी शुल्क भुक्तानी गर्न बाँकी कम्पनीको पहिलो नम्बरमा शंकर ग्रुप छ भनिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
शंकर अग्रवालले आफ्नै लगानीमा करिब ४ वर्ष अघिबाट सुरु गरेको मंगला सिमेन्टमा खराबी भेटीएपछि विभागले कारबाही गरेको छ। विभागले मंगला ब्राण्डको पीपीसी सिमेन्टको बिक्री वितरण बन्द गर्न र गुणस्तर कम भेटिएको ब्याचको सबै सामान फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैबाटै पुष्टी हुन्छ । उसका उत्पादन कस्ता छन् भनेर ।
कहिले गुणस्तरमा, कहिले कालोबजारीमा, कहिले ठगीमा राज्यका बिभिन्न निकायबाट कारबाही तथा सजाय भोगिरहेको शंकर ग्रुपले आफ्ना कर्तुत सार्वजनिक गर्ने दर्जनौ मिडियामाथी ‘चरित्रहत्या’ को आरोप लगाउनु ’पानी माथिको ओभानो’ बन्नु हो कि होइन यसको उत्तर राज्यले दिनुपर्दछ कि पर्दैन ।
देशको मेरुदण्ड’ भनेर विज्ञापन गर्दै आएको शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टिलका डण्डीको कमजोरी पर्दाफास भइसकेको छ । सबैको मुख–मुखमा झुण्डिने गरी खर्चिलो विज्ञापन गरी आफैँले एक नम्बरको डण्डी घोषणा गरेको यो ग्रुप आफ्नै कारणबाट सरकारको कारबाहीमा परेको हो । उपभोक्तालाई विभिन्न आकर्षक तथा झुटा नारा र आश्वासन दिएर ठगी गर्दै आइरहेको शंकर ग्रुपको लुटधन्दा अहिले पर्दाफास हुने क्रम अझै जारी छ । कम्पनीबाटै कमसल डण्डी बजारमा पठाएर बिक्री गर्दै आएको यो ग्रुपको डण्डीको बिक्री देशैभर ५० प्रतिशत घटेको दर्जनौ डिलरहरू नै पंक्तिकारसंग बताए ।
विज्ञापनकै कारण कुनै बेला सर्वसाधारणको पहिलो रोजाई बन्ने गरेको यो जगदम्बाको डण्डी अहिले विकल्पको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । यो कम्पनीको एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न लुटधन्दा पर्दाफास हुन थालेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यसबाट सञ्चालित सबै कम्पनिमाथी एकैपटक छानबीन गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अनुसार गुणस्तरहीन भेटिएको १६ एमएमको ‘टिएमटी बार फी ५००’ रड उत्पादनमा रोक लगाएको हो । जगदम्बाले मापदण्डभन्दा बढी केमिकल प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन रड उत्पादन गरेको भेटिएको विभागले प्रस्ट परेको देखिन्छ ।
यसअघि सोही ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालले कोरोना महामारी सुरु हुनै लाग्दा थर्मल गनको कालोबजारी गर्दै सर्वसाधारणलाई ठगी गरेपछि प्रहरी फन्दामा परेका थिए । कानुनी प्रावधानअनुसार भन्सार तिरेर ल्याएका सामानको मात्र व्यापार गर्न पाइन्छ । सामाजिक काममा ल्याइएका भनिएका वस्तुहरूको व्यापारमा भने बन्देज लगाइएको छ । तर, भन्सार कार्यालयको विवरणअनुसार शंकर ग्रुपले तीन हजार थान टेस्ट किट, केही मास्क, पाँच सय थान पिपिइ र १२ सय थान थर्मल गनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा देखाएर भन्सार तिरेको थियो । र, बाँकी भने ‘सेटिङ’ मा छिराएर अत्यधिक बढी मूल्यमा बेचेको देखिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ।
गत बर्षको २५ चैतमा पक्राउ गरी यही बर्षको १८ बैशाखमा साढे २५ लाख धरौटीमा रिहा भएका अग्रवालमाथिको छानबिन प्रक्रिया अझै जारी छ । जगदम्बा स्टिललाई केही वर्षअघि सरकारले कवाडी कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन स्टिल उत्पादन गरेको भन्दै कारबाही पनि गरेको सर्वविदितै छ, प्रधानमन्त्रीज्यू ।
फलामे छडलगायतका निर्माण सामग्रीको उपभोक्ता जगदम्बा ग्रुपले उसका उत्पादन परीक्षणमा गुणस्तरहीन प्रमाणित भएपछि ‘दक्ष प्राविधिकको अभावमा गल्ती भयो’ भनेको छ । र, बजारबाट सामान फिर्ता लगेको देखिदैन । कमसल डन्डी पटक–पटक बिक्री गर्छ र गल्ती भयो भन्छ,’ एक उपभोक्ताले भने, ‘यस्ता व्यापारीमाथि नेपालमा कुनै कारबाही हुँदैन, सबै पैसामा बिकेका छन्, सायद शंकर ग्रुप यही विश्वासका साथ निरन्तर उपभोक्तामाथि खेलबाड गरिरहेको देखिन्छ नि ।’
फलामको डन्डी उत्पादन गर्न उच्च गुणस्तरको ब्लेड प्रयोग गर्नुपर्नेमा जगदम्बाले कवाडीमार्फत संकलन गरेका फलामका टुक्रा पगालेर ब्लेड बनाई प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । जसमा बाहिरबाट हेर्दा डण्डी एउटै देखिए पनि भित्र भने कमसल हुने गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । जसबाट उपभोक्ता मारमा पर्छन् तर कम्पनी संचालकहरूलाई भने मालामाल हुन्छ । यो कम्पनीको डन्डीमा पनि त्यही भएको हो । यतिबेला व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप कोरोना कहरमा स्वास्थ्य उपकरण कालोबजारी गरेको प्रमाणित भएदेखि नै खराब व्यवसायीका रुपमा बदनाम हुन पुगेको देखिन्छ ।
शंकर ग्रुपका मुख्य कम्पनीहरूमै अहिले छानबिन भइरहेको छ । जसका कारण नयाँ प्रोडक्ट बजारमा जान सकेको छैन । पुराना प्रोडक्ट मात्र अहिले मार्केटमा बिक्री भइरहेका छन् । त्यो पनि न्यूनरूपमा बिक्री भइरहेको छ । यो ग्रुपका जगदम्बा स्टिल उद्योग प्रा.लि. बारा, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. बारा, मंगला सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. धादिङ, रिद्धिसिद्धि मिनिरल वाटर, जगदम्बा मिल्स, जगदम्बा मोटर्स र जगदम्बा वायरमाथि छानबिन भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू ।
काठमाडौंका डिपोहरूमा पुग्दा पनि जगदम्बाका सामान बिक्री हुन छाडेको र गुणस्तरहीन भनिएका सामान कम्पनीले फिर्ता लगेको भेटिएको छ । व्यवसायीका अनुसार उपभोक्ता नै यतिबेला जगदम्बाका उत्पादन किन्नेभन्दा अन्य उत्पादन किन्नेतर्फ आफ्नो मुड बनाएर आउने गरेका छन् । यस कम्पनीको स्टिल मात्र होइन अन्य प्रोडक्टको बिक्रीमा समेत कमी आएको देखिन्छ । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ की शंकर ग्रुपका उत्पादन कति गुणस्तरहिन छ भनेर ।
मिडियामा यो कम्पनीका बारेमा समाचार सार्वजनिक भएपछि उपभोत्ताmले यो कम्पनीका सामान खरिद गर्न छाडेको देखिन्छ । पहिला त राम्रै बिक्री हुन्थ्यो तर अहिले भने ठप्पै छ, एक डिलरले पंक्तिकारसंग बताए ।
विभागको कारबाहीबाट छड उत्पादन तथा बिक्रीमा रोक लगाउँदै बजारबाट फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि कम्पनीको गोदाममा रहेको स्टक पनि नष्ट गर्ने जनाएको भएपनि अझै नष्ट गरेको देखिदैन । राज्य कहाँ छ । कम्पनीको गोदाममा रहेको त नष्ट होेला तर बजारमा गई बिक्री भई प्रयोगमा समेत आइसकेको छड के गर्ने त्यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
प्रयोग भई निर्माण गरिएका भौतिक संरचना के गर्ने ? त्यो संरचनाबाट हुन सक्ने मानवीय जोखिमलगायत सम्पत्तिको जोखिमको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषय अत्यन्तै गम्भीर छ । भविष्यमा यसको प्रयोगबाट निर्माण भएका संरचनाले मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएमा के गर्ने भन्ने विषय जटिल छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले सोच्न जरूरी छ । विगत लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उपभोक्तालाई ठग्दै आएको शंकर ग्रुपको लुटधन्दा सार्वजनिक हुन थालेपछि यतिबेला उपभोक्ता आफैँ सजग हुन थालेको देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
कालोबजारी गरेको आरोपमा रंगेहात पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई पनि उनका कतुर्तबाट बचाउन विभिन्न चलखेल सुरु भइरहेको सुत्रको दाबी छ । लामो समयदेखि सरकारी निकायको आँखा छल्दै र मिलेमतोमा कालोबजारीमा संलग्न हुँदै आइरहेको उक्त व्यापारिक घरानालाई बचाउन शक्तिकेन्द्र लागिरहेको बताइन्छ । ठगी धन्दामा रहेकाको कुनै विवेक र मानवयीता हुँदैन । यिनीहरूले मौका पाउनसाथ यस्तो धन्दा सुरु गरिहाल्छन् । भन्दा फरक पर्दैन कि कसो ?
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वावु पुडासैनीले विभिन्न उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर नापतौल विभागको प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा ती उद्योगले नेपाल गुणस्तरअनुरूप उत्पादन नगरेकाले कारबाही गरिएको बताउदै आएका छन् ।
विभागले नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिहृन) ऐन, २०३७ तथा नियमावली २०४० को नियम (१६) अनुसारको कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यस्तै, मंगला सिमेन्टको संकलित नमुनाको १४ एमपिए र १९ एमपिए हुनुपर्नेमा सोभन्दा धेरै भएकाले विभागले कारबाही गरेको देखिन्छ ।
एकपछि अर्को गर्दै शंकर ग्रुपका विभिन्न लुटधन्दा सार्वजनिक हुन थालेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि शंकर ग्रुपद्वारा सञ्चालित सबै कम्पनीमाथि एकैपटक छानबिन गरेको भेटिएको छ । ‘सुलभ अग्रवाल मात्र नभएर शंकर ग्रुपद्वारा सञ्चालित सबै लगानीमाथि गम्भीर भएर छानबिन गरिरहेका छौ’ महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले पंक्तिकारलाई टेलिफोनमा बताए ।
यसरी कहिले थर्मल गन को कालाबजारी त कहिले जगदम्बा डण्डीको गुणस्तरहिन सामाग्री बचेर चर्चा कमाउदै आएको शंकर ग्रुप सम्पत्ती सुद्धिकरण अनुसन्धन विभागको चर्को निगरानीमा छ । तर, पनि खुलेआम अझै जनता ठग्न छोडेको छैन ।
केही दिन अगाडी एउटा सूचना नै प्रकाशन गरि खण्डन गर्दै आफु सच्चिन तयार रहेको कामदारका कारण केही उत्पादनमा खराबी देखिएको तर पत्रकारहरुले हल्ला चलाएको भन्दै आम सञ्चारकर्मीलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । यो कस्तो ग्रुप हो । प्रधानमन्त्रीज्यू जे गर्न पनि छुट छ शंकर ग्रुपलाई ? सचेत भया ।
जनता बैंकको मुनाफामा ६० प्रतिशतले वृद्धि
एनसीसी बैंकको नाफा ७५ करोड ६३ लाख
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ४ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, सात वर्ष अवधि